တရုတ် လက်ဝါးကြီးအုပ်ထား တဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲ က အေ မရိကန်စစ်တပ် ၏ လက် နက် အင်အားအသေးစိတ်နှင့် စစ်ပွဲအတွင်း ပါဝင်လာကြမည့် မဟာမိတ်နိုင်ငံများ – Shwe Ba
Shwe MM | August 3, 2020 | International News | No Comments
တရုတ်က သူပိုင် ပါတယ် လို့…မတရားကြေငြာထား တဲ့ တောင်တရုတ် ပင်လယ်ပြင် မှာ အမေရိကန် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောအုပ်စု က ၂ စုတောင်မှရောက် ရှိနေ ပါပြီ ။U.S တို့ ရဲ့ လေယာဉ်တင် သင်္ဘော အုပ်စု တစ်စု မှာ
၂. ခရူဇားစစ်သင်္ဘော ၂စီး
၃. ဖျက်သင်္ဘော ၅ စီး
၄. ဖရီးဂိတ်အဆင့် စစ်သင်္ဘော ၅ စီး
၅. နူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးရေငုတ်သင်္ဘော ၂ စီး
၆. ထောက်ပံ့ရေးသင်္ဘော ၁စီး စုစုပေါင်းအားဖြင့် ၁၆ စီးကနေ အစီး ၃၀ ကျော်ရောက် ရှိလို့နေ ပါပြီ
တကယ်လို့ တရုတ် နဲ့ အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ရင် တရုတ်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားက တစ်ဖက် အမေရိကန် ဂျပန် တောင်ကိုရီးယား ဖီလစ်ပိုင် ဗီယက်နမ် ဘရူးနိုင် မလေးရှားအင်ဒိုနီးရှား ထိုင်ဝမ် နဲ့ ဗြိတိန်တို့က တဖက် အင်အား က တဖက်သက်သာနေမှာဖြစ်ပါတယ် ။ရုရှားလို အာဏာရှင် က ဝင်ကူမလာဆိုရင်တော့ ရုရှားဝင်ကူတာ နဲ့ ဥပရောပ နေတိုးအဖွဲ့က ရုရှားကို ဝိုင်းပီးတော့ဆော်မှာပါ ။
တရုတ်လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲက အေ မရိကန်စစ်တပ် ၏ လက်နက် အင်အားအသေး စိတ်နှင့် စစ်ပွဲအတွင်း ပါဝင်လာကြမည့် မဟာမိတ်နိုင်ငံများဒီတော့ ရုရှား က နှာစေးနေမှာဖြစ်ပီး အလွန်ဆုံးကူညီ တယ်ဆိုရင်တောင်မှအမေရိကန်က တရုတ်ဂြိုလ်တုတွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်လို့ GPS နဲ့ ဂြိုလ်တုအဆက် အသွယ်မရှိတော့တဲ့တရုတ်ကို သူ ရဲ့ဂြိုလ်တုတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးလောက် တာပဲရှိမှာပါ ။
အကယ်၍ အီရန် ဘက်ကဝင်ကူရင်လည်းအစ္စရေးက စစ်ထဲကိုဝင်လာမှာပါတကယ်စစ်ဖြစ်လာရင်လည်း …တရုတ်မှာတိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်တွေပဲပစ်ဖို့ရှိတာပါရှိရှိသမျှ ဒုံးကျည်အစင်းရေ သိန်းချီပြီ တရုတ်လက် ၀ါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲက အေ မရိကန်စစ်တပ် ၏ လက်နက် အင်အားအသေးစိတ်နှင့် စစ်ပွဲအတွင်း ပါဝင်လာကြမည့် မဟာမိတ်နိုင်ငံများ
အမေရိကန် နဲ့ အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုစုပြုံပီးပစ်ဖို့ရှိတာပါ ။ အမေရိကန် က လက်ဦးမှု ရယူပြီး တရုတ်ဂြိုလ်တု တွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်မယ် ဆိုရင် ဒုံးကျည်ကလည်းပစ် လို့မရပါဘူး
ကမ္ဘာ့တည်နေရာပြ လမ်းညွှန် စနစ် GPS မရှိဘူးဆိုရင် ဒုံးကျည်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်ပဲ ကိုယ်ပစ်တဲ့ဒုံးကျည်က ကိုယ့် ရဲ့ခေါင်းပေါ် ကို ပြန်ပီးတော့ ကျလာနိုင်ပါတယ်။
လေတပ် အင်အားအရလည်း ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ ကိုဖြ တ်ပီး အမေရိကန် ကို ဗုံးကျဲနိုင်တဲ့မ ဟာဗျူဟာမြောက် ဗုံးကျဲလေယာဉ်တွေမ ရှိသေး ပါဘူး ။
အကယ်၍ အနည်း အကျဉ်း ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင် တရုတ် ကို ပတ်ပတ်လည် ဝိုင်းရံထားတဲ့ အမေရိကန်စစ် အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့ လေကြောင်းရန်ကို ကာကွယ်ရေးနဲ့ဒုံးခွင်းဒုံး စနစ်တွေကို မကျော်ဖြတ်နိုင် ပါဘူး
ဒီတော့ တရုတ်ကြီး လည်း ဂျောင်ပိတ်မိနေတဲ့ခွေးတစ်ကောင် လို ဖြစ်နေ မှာ မြင်ယောင်မိသေး တယ်
နောက် တစ်ခုပြောချင်တာက ငို့ဗဗတွေ လည်း အနေ အထိုင်ဆင်ခြင်ပီးနေတတ် ဖို့လည်းအရေးကြီး ပါတယ် ။ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ အားပြိုင်တဲ့ကြားဖင်ထမယားမိဖို့ ပဲလို တာပါ ။
ဗဗ တို့ ရဲ့ ချစ်တူလေး မောင်ထူး
ကိုးကား – ရိုက်တာ သံပါးစပ် (30.7.2020)
အမေရိကန် ကို ကျော်ချင်နေ တဲ့ တရုတ်ရဲ့ကြောက်စရာ ကောင်း တဲ့ မြေခွေးအမဲလိုက်အစီအစဉ်ကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ အက်ဖ်ဘီ အိုင်ညွှန်မှူး
COVID 19 တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အခြားသောနယ်ပယ်များတွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံ ခိုင်မာစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုဆို